Vaovao - Miady mafy i China hamaha ny famoretana herinaratra sy hampandehanana ny tsenan-javatra tsy voafehy
Mikorontana i Shina hamaha ny famoretana herinaratra sy hampandehanana ny tsena akora tsy voafehy
Tamin'ny 27 Novambra 2019, nisy lehilahy iray nanatona toby famokarana herinaratra arintany any Harbin, faritanin'i Heilongjiang, Sina. REUTERS / Jason Lee
Beijing, 24 septambra (Reuters) -Ny mpamokatra entam-barotra sy mpanamboatra vokatra any China dia mety hahazo fanamaivanana ihany noho ny fanitarana ny herinaratra manelingelina ny asa indostrialy.
Ny masoivohom-pirenena momba ny fandrosoana ara-toekarena any Beijing, ny Vaomieram-pirenena ho an'ny fampandrosoana sy ny fanavaozana, dia nilaza tamin'ny zoma fa hiasa izy ireo hamahana ny tsy fahampian'ny herinaratra izay nanelingelina ny famokarana hatramin'ny volana jona, ary amin'ny fampiharana ny fepetra vaovao mifehy ny emissions, tato anatin'ny herinandro vitsivitsy. hamaky bebe kokoa
Nasongadiny manokana fa ny indostrian'ny zezika, izay miankina amin'ny entona voajanahary, dia voa mafy indrindra, ary niantso ny mpamokatra angovo lehibe ao amin'ny firenena mba hanatanteraka ny fifanarahana famatsiana rehetra miaraka amin'ireo mpamokatra zezika.
Na izany aza, miitatra ny fiantraikan'ny tsy fahampiana. Orinasa Sinoa 15 lisitra farafaharatsiny izay mamokatra fitaovana sy entam-barotra isan-karazany (manomboka amin'ny aliminioma sy simika ka hatramin'ny loko sy fanaka) no nilaza fa voakitiky ny fameperana herinaratra ny famokarana azy ireo.
Anisan'izany i Yunnan Aluminium (000807.SZ), zanaky ny vondrona metaly Chinalco an'ny fanjakana any Chineco, izay nanapaka ny tanjon'ny famokarana aliminioma 2021 hatramin'ny 500,000 taonina na efa ho 18%.
Ny sampana Yunnan an'ny Henan Shenhuo Coal and Electric (000933.SZ) dia nanambara ihany koa fa tsy hahatratra ny tanjon'ny famokarana isan-taona. Na dia namindra ny antsasaky ny fahafahan'ny famokarana aliminioma aza ny orinasa ray aman-dreny any amin'ny faritany atsimo andrefana mba hanararaotra ireo loharanon-karena hitrandraka angovo avy any an-toerana.
Tamin'ny tapany voalohan'ity taona ity dia ny 10 amin'ireo faritra afovoany 30 ihany no nahatratra ny tanjon'ny angovo, raha ny fanjifana angovo tany amin'ny faritany 9 sy ny faritra kosa dia nitombo isan-taona, ary ny departemanta faritany mifandraika amin'izany dia nanatsara ny ezaka fanaraha-maso ny famoahana emission. hamaky bebe kokoa
Ny faritany atsinanan'i Jiangsu ihany no nilaza tamin'ity volana ity fa nanomboka fanaraha-maso orinasa 323 eo an-toerana miaraka amin'ny fanjifana angovo isan-taona mihoatra ny 50.000 taonina amin'ny arina arintany sy orinasa 29 hafa izay mitaky be ny angovo.
Ireo sy ireo fanaraha-maso hafa dia nanampy tamin'ny famerana ny fampiasana angovo nanerana ny firenena, nanena ny famokarana herinaratra an'i Shina tamin'ny volana Aogositra tamin'ny 2,7% tamin'ny volana lasa ka hatramin'ny 738,35 miliara kWh.
Saingy mbola ity no volana faharoa farany ambony an-tsoratra. Taorian'ny areti-mandringana, ny fangatahana entam-barotra manerantany sy an-trano dia azo averina miaraka amin'ny fanohanan'ny fepetra fanentanana, ary avo ny fangatahan'ny herinaratra amin'ny ankapobeny.
Saingy tsy ny an'i Shina ihany no olana, satria ny vidin'ny gazy voajanahary dia nanosika ireo orinasa matanjaka angovo any amin'ny faritra maro eto an-tany hampihena ny famokarana. hamaky bebe kokoa
Ankoatry ny indostria mahery vaika toy ny fandrendrehana aliminioma, ny famonoana vy, ary ny zezika, ny sehatry ny indostria hafa koa dia tratry ny fahatapahan'ny herinaratra, izay niteraka fiakarana avo lenta tamin'ny vidin'ny akora.
Ny vidin'ny ferrosilicon (firaka ampiasaina hanamafisana ny vy sy metaly hafa) dia nitombo 50% tamin'ny volana lasa.
Tao anatin'izay herinandro lasa izay, nirongatra ihany koa ny vidin'ny ingic silikazyanganônôma sy magôniôma, nametraka avo lenta na avo lenta an-taonany miaraka amin'ny vidin'ny fidirana mafy na indostrialy hafa toy ny urea, aliminioma ary arina «coking».
Raha ny voalazan'ny mpividy sakafo soja any amin'ny faritra dia voakitika ihany koa ireo mpamokatra entam-barotra mifandraika amin'ny sakafo. Farafahakeliny, zavamaniry fanodinana soja telo any Tianjin any amin'ny morontsiraka atsinanan'i Sina no nakatona tato ho ato.
Na dia andrasana hanadihady ny tsy fahampian'ny herinaratra aza ny tetik'asa nasionaly misahana ny fampandrosoana sy ny fanavaozana dia manantena ny hanamaivanana ny fanaintainana ao anatin'ny fotoana fohy, manantena ny mpanara-maso ny tsena fa tsy hivadika tampoka ny fijoroan'i Beijing.
Frederic Neumann, mpiara-miasa amin'ny fikarohana ara-toekarena aziatika ao amin'ny HSBC, dia nilaza hoe: "Noho ny filana maika ny hamaritana, na farafaharatsiny hampihena ny tanjaky ny karbaona ao amin'ny toekarena, dia hitohy ny fampiharana ny lalàna mifehy ny tontolo iainana izay henjana kokoa."
Misoratra anarana amin'ny mailaka asongadinay isan'andro mba handraisana ireo tatitra Reuters tsy miankina farany nalefa tany amin'ny boaty.
Ny alatsinainy lasa teo dia nikatona mafy indray ny fatoran'ny orinasan-trano Sinoa, satria toa tsy nahatratra ny fihodinana fahatelo tamin'ny fandoavana trosa i Evergrande tao anatin'ny herinandro vitsivitsy, raha ireo mpifaninana Modern Land sy Sony kosa no lasa orinasa farany nifaninana hanemotra ny fetr'andro farany.
Reuters, ny fizarana vaovao sy haino aman-jery an'ny Thomson Reuters, no mpamatsy vaovao multimedia lehibe indrindra manerantany, mahatratra amina miliara eran'izao tontolo izao isan'andro. Reuters dia manome vaovao momba ny asa aman-draharaha, ara-bola, an-trano ary iraisam-pirenena amin'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fantsona birao, fikambanan'ny haino aman-jery eran-tany, hetsika indostrialy ary mivantana.
Miantehitra amin'ny atiny manam-pahefana, ny fahaizan'ny fanovana mpisolovava ary ny haitao famaritana ny indostria hananganana ilay tohan-kevitra matanjaka indrindra.
Ny vahaolana feno indrindra amin'ny fitantanana ny hetra sy ny fanarahan-dalàna rehetra ilaina.
Fampahalalana, fanadihadiana ary vaovao manokana momba ny tsena ara-bola-azo alaina ao amin'ny biraonao sy ny interface interface finday.
Sakano ny olona sy ny entona be risika amin'ny sehatra manerantany mba hahitana risika miafina amin'ny fifandraisana amin'ny orinasa sy ny tambajotra iraisan'ny samy olona.
Nickel Wire, Ireo singa fanafanana, Wire fanoherana, Open Coil Heater, Bayonet Heating Heating, Bayonet Heater,